Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika oo lagu eedeeyay in uu laaluush ka qaatay Fahad & Farmajo - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika oo lagu eedeeyay in uu laaluush ka qaatay...
Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika oo lagu eedeeyay in uu laaluush ka qaatay Fahad & Farmajo
Gudoomiyaha gudiga midowga afrika Moussa Faki Mahamat ayaa lagu eedeeyay in uu ku lug leeyahay musuqmaasuq iyo in uu ku tagri falay awoodda xafiiska.
Guddoomiyaha ayaa lagu eedeeyay eedeymo dhowr oo ay ka mid tahay in uu lacag laaluush ah ka qaatay maamulka Madaxweyne Farmaajo isagoona markaa ogolaaday in ciidamda Itoobiya ku xasuuqeen dad shacab ah magaalada Baydhabo bishii Desember ee sanadkii 2018.
Eedeymaha ayaa lagu sameeyay qoraal isdhaafsi ah oo ay ilo wareedyo dhowr ah la wadaageen Muqdisho Online, balse ay naga codsadeen in aanan daabicin nuqulada emailada eedeeymaha ah ee loo jeediyay Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika.
Nuqulada aan helnay oo ku taariikheysan Bishan Maarso 7 2020, ayaa waxaa eedeymaha loo jeediyay Moussa Faki ku saxiixan Madaxa Shaqaalaha Midowga Afrika Sabelo Mbokazi.
Howlwadeenada Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in aay walaac weyn ka qabaan qaabka maafiyanimada ah ee uu xafiiska u isticmaalayo Guddoomiyaha Ururka iyagoo sheegay in haddii aanan tallaabo degdeg ah laga qaadin uu ururka weyn doono kalsoonida dalalka Afrika ee ku bahoobay Midowga Afrika.
Nuqul ka mid ah emailada eedeymaha ah ee loo jeediyay Moussa Faki ayaa la sheegay in laba jeer uu lacago aan la sheegin cadadeeda uu ka qaatay Safaaradda Qatar ay ku leedahay magaalada Addis Ababa xilli uu magaalada safar ku joogay Agaasimaha Sirdoonka Soomaaliya Fahad Yasin.
Dowladda Qatar ayaa iska fogeysay eedeymahaas waxayna email jawaab ah oo aay u soo direen ururka Midowga Afrika aay ku sheegeen in Dowladda Qatar aanay siin wax lacag oo laaluush ah Guddooiyaha, balse waxay sheegeen in Moussa uu ka mid yahay saaxiibada ay Qatar ku leedahay Midowga Afrika.
Previous articleBeesha Habargedir oo si farsamaysan Qoor Qoor ugala wareegtay Kheyre! Maxaa xigi doona?
Next article(Video) Ciidan Itoobiyaan ah oo soo galay Gedo & Ciidanka Jubbaland oo heegan buuxa galay